Liiska 10-ka Ciyaaryahan Ee Ugu Mushaarka Badan Aduunka Waqtigaan (2021)
HomeWararka Ciyaaraha MaantaLiiska 10-ka ciyaaryahan ee ugu mushaarka badan aduunka waqtigaan (2021)
April 11, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Horyaalka France, Horyaalka Germalka, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy, Horyaalka Spain 0
Kubadda cagtu waa cayaaraha loogu daawashada badan yahay adduunka, qaddarka lacagta ah ee ku lug lehna waxay ka dhigaysaa in xidigaha ay helaan mushaar badan.
Qaar ka mid ah ciyaartoyda ugu mushaarka badan adduunka waa ciyaartoy kubada cagta ah, oo ay ku jiraan ciyaaryahanka Juventus Cristiano Ronaldo iyo xiddiga Barcelona Lionel Messi. Lacagta sida joogtada ah loogu shubo isboortiga waxay la micno tahay in kubada cagta ay haatan u muuqato inay lacag badan siineyso ciyaartoyda.
Qaar ka mid ah kooxaha ugu waa weyn adduunka, oo ay ku jiraan Manchester United, Real Madrid iyo Barcelona, ​​waxay leeyihiin qaar ka mid ah biilasha mushaharka ugu waaweyn ee kubadda cagta.
10-ka ciyaaryahan ee ugu mushaarka badan aduunka waqtigaan (2021)
# 10 Samuel Umtiti (Barcelona) – 208,000 todobaadkii
# 9 Juan Mata (Manchester United) – 150,000 todobaadkii
# 8 Mauro Icardi (Paris Saint-Germain) – 168,000 toddobaadkii
#7 Aaron Ramsey (Juventus) – £250,000 Todobaadkii
#6 Eden Hazard (Real Madrid) – £416,000 Todobaadkii
#5 Paul Pogba (Manchester United) – £300,000 Todobaadkii
#4 Kepa Arrizabalaga (Chelsea)- £180,000 Todobaadkii